Rugby: nodimandry Rarivo, filohan’ny federasiona teo aloha | NewsMada
Rugby: nodimandry Rarivo, filohan’ny federasiona teo aloha
Tataovan-drahona ny tontolon’ny fanatanjahantena. Nodimandry, ny zoma lasa teo Rarivo Solomampionona, filohan’ny Federasiona malagasin’ny rugby, teo aloha (1996 – 2000). Lavon’ilay valanaretina «covid 19 » izy, rehefa nivahiny 76 taona teto an-tany. Olona niaina tao anatin’ny fanatanjahantena Itompokolahy. Nampisongadina azy ary tena nandaniany ny androm-pahavelomany ny taranja basikety sy ny rugby.
Tamin’ny fotoana nitondrany ny Federasiona malagasy ny rugby (FMR) ny nahazoan’i Madagasikara ny ho tompondaka eran-tany voalohany, sokajy “junior”, ho an’ny vondrona “D”, notanterahina tany Soisa, ny taona 1999 ka nitarika ny delegasiona malagasy, tamin’izany, ny tenany. Nanomboka teo, fantatra sy re laza maneran-tany ny baolina lavalava, malagasy. Ankoatra izay, efa filohan’ny fileovana Stade Olympique de l’Emyrne (SOE), ihany koa Rarivo Solomampionona, ny taona 1990 sy ny 2014 -2017.
Fantatra teo amin’ny taranja basikety ihany koa Itompokolahy, satria efa kapitenin’ny klioba SOE sy ny ekipam-pirenena (1965 -1969). Efa nanatevina ny ekipan’ny AS Poste tany Toulouse, fony izy nianatra tany ampita. Ankoatra izay, efa talen’ny fanatanjahantena izy, ny 2004 – 2007.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana izahay eto amin’ny gazety Taratra.